India - Ukuhamba kwe-Absolut | Ukuhamba kwe-Absolut (Ikhasi 2)
Umlando weGastronomy yaseNdiya
Umlando we-gastronomy yase-India unomsuka wesiko osalondolozwe kumasiko amaningi ezakhamizi zakhona.
Uhlelo lwezezimali lwaseNdiya lunokwehluka okuningi uma kuqhathaniswa nolwamazwe aseNtshonalanga. Umsebenzi…
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu emhlabeni
Ukusuka eJapan kuye eGranada, sizicwilisa ezikhumbuzweni ezibaluleke kakhulu emhlabeni ukukukhuthaza ukuthi uqale uhambo lokugcina.
I-Fort Kochi: Ukushona kwelanga, Izinongo kanye neCharm Colonial eNingizimu India
Esifundazweni eseningizimu yeNdiya iKerala, kunetheku elidala lamakoloni elibizwa ngokuthi iFort Kochi eligcwele izinongo, ukungaziphathi kahle nokuthandeka.
Ukuhamba ngesitimela eNdiya
Ukuhamba ngesitimela eNdiya kuyinto edinga izeluleko ezithile, amehlo avulekile kepha, ngaphezu kwakho konke, amandla okuzidedela uhambe.
Sikutshela ngawo wonke amasiko namasiko e-India, izwe eliyingqayizivele elivelele izinkolo zalo, i-gastronomy kanye ne-curiosities
Izeluleko eziyi-15 zokuya eNdiya
Kusukela ezikhathini ezihamba phambili zokuya emibingelelweni ejwayelekile, lezi zeluleko eziyi-15 zokuya eNdiya zizokusiza uhlele kangcono umuzwa wakho.
Lezi zindawo eziyi-15 ezinemibala egqamile emhlabeni ziguqula ulwazi lokuhamba lube uthingo lwethemba, isiko nokuhlangana.
Lokhu kushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni kusikhumbuza ngesidingo sokuhamba futhi sibe okuthile okucabangayo.
Izeluleko eziyi-9 zokuxhumana nabantu bendawo lapho usohambweni
Lezi zeluleko eziyi-9 zokuxhumana nabantu bendawo lapho usohambweni zizokuvumela ukuthi ujwayele leyo ndawo entsha kuzo zonke izici.
Ukuvakashela iTaj Mahal eNdiya
ITaj Mahal, itshe lesikhumbuzo laseNdiya, lakhiwa nguMbusi Shah Jahan ngokuhlonipha unkosikazi wakhe ongasekho, uMumtaz Mahal, ngo-1632.
IGreat Wall noma iGrand Canyon yizindawo ezimbili kwezilishumi emhlabeni okufanele uzibone ngaphambi kokuba ufe.
Ukuphuza amanzi asemabhodleleni, ukuqasha ukudlulisa noma ukuzivumela sihambe ngamanye amathiphu alandelayo osuku lokuqala endaweni entsha.
Izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni zokuzijwayeza ukuvakasha kwezemvelo
Ukuhamba ngokwenza i-ecotourism eBorneo, eAmazon noma eNdiya kuba yindlela engcono yokuhlonipha ukuhlukahluka kwemvelo namasiko ahlukahlukene emhlabeni.
Imbali yeLotus, iphunga elijwayelekile nelikazwelonke laseNdiya
Imbali ye-lotus yimbali yezwe laseNdiya. Yaziwa nangokuthi i-Sacred Lotus, iLotus, i-Asia Lotus, ...
Izindawo ezibalulekile zobuHindu eNdiya
Namuhla sizohlangana nezindawo ezibaluleke kakhulu zobuHindu eNdiya. Ake siqale ukuvakasha ku ...
Izindawo ezingcwele zobuHindu eNdiya
Namuhla sizovakashela izindawo ezingcwele kunazo zonke zobuHindu eNdiya. Ake siqale ukuvakasha ethempelini ...
I-India izwe elinemifula ehlukahlukene, yingakho sinethuba lokuzijwayeza ...
Ayini amachweba amakhulu eNdiya?
Namuhla sizovakashela amachweba abaluleke kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokusho iziqhingi ...
Amathempeli Anikezelwe kuVishnu eNdiya
Namuhla sizovakashela amanye amathempeli aseNdiya anikezelwe kunkulunkulu uVishnu. Ake siqale uhambo lwenkolo edolobheni ...
Ngobani abagijimi abahamba phambili eNdiya?
Ngalesi sikhathi sizothola ukuthi obani abagijimi abahamba phambili eNdiya. Ake siqale ngokusho uSachin Tendulkar, odume ...
I-Bay of Bengal, ingxenye yoLwandlekazi i-Indian
IGulf noma iBay of Bengal itholakala enyakatho-ntshonalanga ye-Indian Ocean. Ulwandle olukhawulela ...
Ukuthandwa: Isimo Somphakathi noma Ukucwaswa eNdiya?
Phambilini sixoxe ngodaba oluyinkimbinkimbi lwama-castes eNdiya. Sivuselela inkumbulo yakho futhi sikutshele engikwaziyo ...
AmaHindu Castes namaBrahmins
Ngabe ungathanda ukwazi okwengeziwe ngokuhlelwa komphakathi eNdiya? Ake siqale ngokuthi ...
Izinganekwane nezinsumansumane zaseNdiya
Silokhu sikhuluma ngezinganekwane nezinsumansumane zaseNdiya. Sigcine ukukhuluma ngezincwadi ezingcwele ezibalulekile ...
Imibhalo engcwele yaseNdiya
Ngaphandle kokungabaza, i-India umhlaba wezindaba, izinganekwane nezinsumansumane; eziningi zazo ezine ...
IRanipet, idolobha elingcoliswe eNdiya
I-India ivelela njengezwe elingokwemvelo kakhulu, kepha kunamadolobha angcoliswe ngempela. Enye yazo ngu…
Mc Donalds eNdiya
Njengoba sazi kahle, iMc Donalds iyinhlangano yokudla okusheshayo enama-hamburger ayo adumile, amafriji nokudla okujabulisayo ...
IKamasutra nencwadi edumile yamaHindu yothando (Ingxenye 1)
Ekhulwini lama-XNUMX, imibono kaSigmund Freud yayiphethe ukuchaza, emhlabeni wezengqondo, ...
UTilak, imvukuzane egqokwa amaHindu emabunzini abo (Ingxenye 1)
Uma kunophawu esingazitholela ngalo isiko lamaHindu ngokuzenzakalela, ichashazi elibomvu elincane lelo ...
Izinkomo ezingcwele eNdiya
Lapho sibhekene nalolu daba, into yokuqala efika engqondweni yigama elithi "inkomo engcwele", ngalo ...
Ithempeli Lamagundane eNdiya
Ngokuhamba kwesikhathi, amathempeli amaningi enziwe ukukhumbula abantu abathile noma izinto ezinganekwane, kepha njalo ...
Zinkulu futhi bezikhona kusukela ezikhathini zasendulo, ngaphambi kokuba ziye empini zihambisana namabutho, namuhla ...
UJesu waseNazaretha nobudlelwano bakhe neNdiya
UJesu waseNazaretha, ngokobuKrestu, indodana kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi yachitha isikhathi esithile eNdiya. I-Nerd…
Ukudlala ikhilikithi eNdiya
Kunemidlalo ethile edinga isibindi esikhulu nokungabi nasibindi, eminye yamandla nobuqili kanjalo nekhono kanye ...
I-India, esenkabeni ye-Asia, ijabulela izimo zezulu ezahlukahlukene. Okudume kakhulu yi ...
Amawayini eNdiya: Isiko lasendulo lizalwa kabusha
Mhlawumbe lapho ucabanga ngewayini, enye yezindawo zokugcina ocabanga ngayo yi-India. Noma kunjalo,…
I-curry yenkukhu, isidlo sendabuko saseNdiya
Yisiphi isidlo esingomunye wabamele kakhulu eNdiya? Uma sihlanganisa i-curry nenkukhu, sithola inkukhu ...
Ubumpofu eNdiya, olunye uhlangothi lwemali
Sonke siyazi ukuthi singazincoma kanjani izimangaliso zesikhumbuzo eNdiya, amabhishi aso, ukudla kwaso okuhle, kepha kwesinye isikhathi kukhona ...
Izindawo ezinhle zeNdiya yemvelo
Esinye sezici eziphawuleka kakhulu eNdiya ngamathafa awo amahle, lapho kugcwele khona uhlaza oluningi, izilwane eziningi ...
Izindawo zokuvubukula eNdiya: adichanallur no-Agam Kuan
I-India izwe elinomlando omningi, endaweni yalo singabona izikhumbuzo ezihlukile, kepha futhi nochungechunge ...